မသိလိုက်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း - Hello Sayarwon
Dr.Aye Myat Myat Noe မှ ရေးသားသည်။ 18/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မိမိသားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသား လောင်းသေဆုံးနေပေမယ့် ထိုဆုံးရှုံးမှုကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမသိလိုက်ဘဲ တစ်ရှူးတွေရှင်းမပစ်သေးတာဖြစ်တယ်။ အသံတိတ်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုကို ခန္ဓာကိုယ်ကအသိအမှတ်မပြုတာ၊ မသိလိုက်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဟော်မုန်းတွေဆက်ထုတ်နေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာတွေဆက်ခံစားရစေပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါပဲ မသိလိုက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဟာ သွေးဆင်းခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားဗိုက်နာခြင်း၊ သန္ဓေသားတစ်ရှူးများဆင်းခြင်း တို့ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့လက္ခဏာတွေမပြပါဘူး။ အချင်းရဲ့ ဟော်မုန်းများဆက်ထုတ်နေခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများဆက်ရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာတော့ တချို့သောကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ် (ရင်သားတင်းခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်းစသည်)။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ညိုညစ်ညစ် သို့ အနီရောင် ဆင်းခြင်းများသတိပြုမိနိုင်တယ်။ သန္ဓေသားနှလုံးခုန်သံမကြားရပါက သန္ဓေသားသေဆုံးခြင်းအဖြစ် ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ထရာဆောင်းမှာ မဖွံ့ဖြိုးတော့တဲ့သန္ဓေသားအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရဲ့ ၁ ရာနှုန်းလောက် တစ်နည်း အယောက် ၁၀၀ မှာ ၁ယောက် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာကြောင့် သတိမပြုမိသော ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းဖြစ်ရသလဲ
အများအားဖြင့် ခရိုမိုဆုန်းပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဟာ သန္ဓေသားရဲ့ ရှေ့ဆက်ကြီးထွားခြင်းကို တားဆီးလိုက်တယ်။
ကုသမှု နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မည်သည့်အချိန်မှာ ဖြစ်လဲပေါ်မူတည်တယ်။ လနုစဉ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတွေကတော့ ကုသမှုမလိုဘဲ၊ အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ထိုတစ်ရှူးတွေကို သူ့ဖာသာသူစွန့်ထုတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ဆက်လက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကို ခန္ဓာကိုယ်က သတိပြုမိဖို့ပဲစောင့်ရန်လိုတယ်။ ဆေးကူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Cytotec (misoprostol) ဟာ သားအိမ်ကိုညှစ်စေပြီး တစ်ရှူးတွေထွက်သွားစေတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ရှူးတွေကျန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က D&C လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ပတ် ၁၂ ပတ်ကျော်ပြီး သန္ဓေသားတစ်ရှူးတွေစွန့်ထုတ်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်မှ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုကတော့ ဆရာဝန်မှ သားအိမ်ခေါင်းကိုဖွင့်ကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ဖယ်ပစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသားတစ်ရှူးများ ကျန်ခြင်းကြောင့် ရောဂါပိုးကူးခြင်းကိုတားရန်လည်း ထိုနည်းကိုသုံးတယ်။
သတိမပြုမိလိုက်သောကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ သန္ဓေသားတစ်ရှူးများ သူ့အလိုလို သို့ ဆေးအကူအညီဖြင့် စွန့်ထုတ်ပါက ဓမ္မတာစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် D&C လုပ်ပြီးထုတ်ရန်လိုခဲ့ပါက ဓမ္မတာစက်ဝန်းသုံးကြိမ်လည်အောင်စောင့်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Missed Miscarriage. https://www.fertilityauthority.com/fertility-issues/miscarriage/missed-miscarriageAccessed April 1, 2017
What IsaMissed Miscarriage? http://www.parents.com/pregnancy/complications/miscarriage/what-is-a-missed-miscarriage/Accessed April 1, 2017
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သွေးအနည်းငယ်ဆင်းတာ စိုးရိမ်ရသလား
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး နောက် ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလဲ
မရည်ရွယ်ထားသော ကိုယ်ဝန်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ